अध्यक्ष दाहालको अग्रता कायमै – YesKathmandu.com
अध्यक्ष दाहालको अग्रता कायमै
शनिबार २३, मङि्सर २०७४
चितवन क्षेत्र नं ३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अग्रता कायमै रहेको छ । सो क्षेत्रमा आठ हजार ८५ मतगणना गर्दा दाहालले चार हजार ६२७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँको प्रतिद्वन्द्वी विक्रम पाण्डेले दुई हजार ८७७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । पाण्डे भन्दा दाहालले एक हजार ७५० मत बढी ल्याउनुभएको छ । सो क्षेत्रमा एक लाख २५ हजार ८१८ मतदाता रहेकोमा ९३ हजार ८२६ मत खसेको थियो ।
यसैगरी क्षेत्र नं २ मा ६ हजार ३८८ मतगणना गर्दा नेकपा ९एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले तीन हजार ९९३ र नेकाका शेषनाथ अधिकारीले एक हजार ९३५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । क्षेत्र नं २ मा एक लाख आठ हजार २१९ मतदाता रहेकोमा ७७ हजार ४७६ मत खसेको थियो ।
क्षेत्र नं १ मा सात हजार ७७४ मतगणना हुँदा नेकपा ९एमाले०का सुरेन्द्र पाण्डेले चार हजार ५३९ र काँग्रेसका राजेन्द्र बुर्लाकोटीले दुई हजार ८९४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । यस क्षेत्रमा एक लाख २५ हजार ८२३ मतदाता रहेकोमा ९३ हजार ८२६ मत खसेको थियो ।
जिल्लामा कुल मतदाता सङ्ख्या तीन लाख ५४ हजार ३६ रहेको छ । समग्रमा जिल्लामा ७३ दशमलव ६२ प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरि ढकालले जानकारी दिएका छन।
मोरङ क्षेत्र नं. २ बाट मिनेन्द्र रिजाल विजयी
टेलीफोनमा प्रचण्डले ओलीलाई भने अव त तपाईको रिस मर्यो ?
३ वर्षपछी विराटनगर जुटमिल पुन :संचालन हुने,वसन्त बन मिलको अध्यक्षमा नियुक्त
गैरआवासीय नेपाली संघ ईक्वेटरियल गेनियाको अध्यक्षमा चन्द्र सेढाई निर्विरोध निर्वाचित
कुन-कुन मन्त्रालय रहन्छन केन्द्रमा ( मन्त्रालय र तिनका कार्य जिम्मेवारीसहित )
सतीशलाल आचार्यको करमारा धन्दाः करोडौंको प्रस्ताव पुग्यो टंगाल, वूढानिलकण्ठ हुँदै लाजिम्पाटसम्म
सेन्ट जेभिएर कलेजको दादागिरीमा प्रहरी रमिते
वैदेशिक रोजगार छोडेर रिसोर्ट सञ्चालनमा
अर्थमन्त्री महराको लामो हात,आचारसंहिताको धज्जी उडाँउदै दश बीमा कम्पनीलाई इजाजत !
सांसद नै सांसदको धनी देश बन्दै नेपाल,हेर्नुहोस कुन तहमा कति सांसद !
महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिवल प्रतियोगिता मंगलबारदेखि